बन्ने भयो ‘छक्का पन्जा ३’ | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - Oct 10, 2017
बन्ने भयो ‘छक्का पन्जा ३’
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – प्रदर्शनरत सिनेमा ‘छक्का पन्जा २’का निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले यसको नयाँ सिरिज घोषणा गरेका छन् ।
व्यवसायिक सुपरहिट ‘छक्का पन्जा’ सिरिजको नयाँ भाग ‘छक्का पन्जा ३’ हुनेछ । दीपकराज सहितको कमेडी टिम मह जोडीले निर्माण गर्ने ‘शत्रुगते’मा व्यस्त हुनेछ । त्यसपछी ‘छक्का पन्जा ३’को काम थालनी हुनेछ । अर्को दशैंको फुलपातीमा सिनेमा रिलिज गर्ने गरि काम अगाडी बढाउने निर्माता दीपकराज गिरीले जानकारी दिए ।
दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, वर्षा राउत, जितु नेपाल, शिवहरी पौडेल, केदार घिमिरे सिनेमामा तेहरिने छन् । सिनेमाको लागि अन्य टिम फाईनल भैसकेका छैनन् । सिनेमालाई दीपाश्री निरौलाले नै निर्देशन गर्नेछिन् ।
बन्ने भयो ‘छक्का पन्जा ३’0out of5based on0ratings.0user reviews.
‘फाटेको जुत्ता’को फोटो खिच्नुस, जित्नुहोस् नयाँ जुत्ता !